ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မန္တလေးဖြစ်ရပ်အပေါ် ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး နိုင်ငံရေးမလုပ်သင့်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော
မန္တလေးဖြစ်ရပ်အပေါ် ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး နိုင်ငံရေးမလုပ်သင့်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော
နေပြည်တော်၊ မဇ္ဈိမ - Friday, 04 July 2014
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ရက်အတွင်း လူသေဆုံးမှုရှိခဲ့ပြီး ဇူလိုင် ၃ရက်ကစ၍ ‘ညမထွက်ရ’ အမိန့် ထုတ်ထားသည့် မန္တလေး ပဋိပက္ခနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဘာသာရေးကိုခုတုံးလုပ်ပြီး နိုင်ငံရေးမလုပ်သင့်ဟု မဇ္ဈိမကို ဇူလိုင်လ ၄ရက် နံနက်တွင် ပြောခဲ့သည်။
“အဲဒီဖြစ်ရပ်အပေါ် အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့သဘောထားကို ကြေညာချက်ထုတ်တယ်၊ ထုတ်ထုတ်ချင်းမှာ အတု ထွက်လာတယ်၊ အဲဒီကတည်းက ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးမှာ အသုံးချနေသလားဆိုတာ အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ အများကြီး စဉ်းစားရမယ်၊ ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးမှာ အသုံးမချသင့်ဘူး၊ ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး နိုင်ငံရေး လုပ်နေတာကတော့ အခြေခံဥပဒေနဲ့ မညီညွတ်ဘူး” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဇူလိုင်လ ၄ရက် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေး မစတင်မီ မဇ္ဈိမ၏အမေးကို ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မန္တလေး ပဋိပက္ခနှင့် ပတ်သက်ပြီး NLD က ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက်တွင် ‘လူမျိုးစုများ တွေ့ဆုံဖြေရှင်းကြစေလိုကြောင်းနှင့် ပဋိပက္ခများ ထပ်မံမဖြစ်ပွားစေလိုကြောင်း’ ဖော်ပြပါရှိသော်လည်း ကြေညာချက် အတုတွင်မူ ‘ ယခုဖြစ်ရပ်၌ တာဝန်ပေါ့လျော့သည့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတို့အား ပြင်းထန်စွာအရေး ယူသင့်ကြောင်း အပြင် မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်တို့အား ကာကွယ်ပေးသင့်သည် ဟူသည့် အဓိပ္ပါယ်မျိုး ဖော်ပြပါရှိသည်ဆို၏။
မန္တလေးမြို့တွင် ဇူလိုင်လ ၁ရက်၊ ၂ရက်နှင့် ၃ရက်နေ့များတွင် ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး ၁၄ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနောက် မန္တလေးမြို့အတွင်းရှိ မြို့နယ် ခြောက်မြို့နယ်တွင် ဇူလိုင်လ ၃ရက်မှ စ၍ ည၉နာရီမှ နံနက် ၅နာရီအထိ ညမထွက်အမိန့်ကို ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
- ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးတွင် အသုံးပြုနေပြီလား click
- ဘာသာရေးကို အသုံးပြုပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်နေသည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စွပ်စွဲ click
- မန္တလေး၌ ဖြစ်ပေါ်နေသည့်ပဋိပက္ခများနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာသာရေးကို အသုံးချကာ နိုင်ငံရေး လုပ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား click
- ဘာသာရေးကို အသုံးချကာ နိုင်ငံရေးလုပ်နေခြင်းဟု စဉ်းစားစရာရှိနေကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောဆို၊ မန္တလေးဖြစ်စဉ်အပေါ် အဖွဲ့ချုပ်၏ ကြေညာချက်ကို အတုလုပ်ခြင်းသည် နိုင်ငံရေးတိုက်ခိုက်မှုတခုဖြစ်ဟုဆို (ရုပ်သံ) click
why are you so silent for years since you have been released?
Who make you and put you in that position not to able to speak asaopposition leader?
If you are remained silence like this for your own plan then you will get huge "regret" in near future.
I hope you will not make silly mistakes again like you did in the past.
I believe you are smart enough not to be "Cheated" by the fools.